Sekolin’ny Fanaovan-gazety Serba An’Aterineto: Fitaovam-Pampianarana An-Tserasera Vaovao Taona 2009 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2017 3:04 GMT
(Marihina fa tamin'ny janoary 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny anglisy)
Vao haingana ny Sekolin'ny Fanaovan-gazety Serba An'Aterineto no nisongadina tao amin'ny tranonkalam-panaovan-gazety iray an-tserasera mahaleotena antsoina hoe Journalism.co.uk ary nilaza ny tatitra fa eo am-pampidirana fitaovana vaovao an-tserasera amin'ny fandaharam-pianarana ry zareo eo am-panombohan'ny taona 2009:
* Manana bilaogy ny mpianatra tsirairay. Mila mamokatra tsanganana iray isan-kerinandro ry zareo arakaraka ny devoara omena an-dry zareo. Ny fahana avy amin'ny bilaoginy dia hita ao amin'ny NetVibes, ato.
* Hivoaka amin'ny fiandohan'ny taona vaovao ny fandaharam-pianarana an-tserasera, amin'ny fampiasana fitaovana an'aterineto tahaka ny SlideShare.net, izay ahafahan'ny mpampianatra mampiditra fanolorana am-peo mandritra ny fanolorana ireo tohivakan-tsary.
* Eo am-piomanana ny boky iray miresaka ny fanaovan-gazety an'aterineto, izay heverin-dry izao hivoaka ao anatin'ny volana vitsivitsy.
* Efa anatin'ny kinasa amin'ny tapataona 2009 faharoa ny fampianarana amin'ny teniroa.
Mandritra izany fotoana izany dia mandroso tsara ny kilasy ao an-tsekoly. Nanome lesona nohafainganina momba ny sary fanao an-gazety ho an'ny mpandray anjara ilay Amerikana mpaka sary sady mpanangom-baovao Russell Gordon.
Russel Gordon, saripikan'i zikica.zivkovic
Ny sasantsasany amin'ny setriny avy amin'ny mpianatra tao amin'ny bilaogin'ny tetikasa:
Nanoratra i Darko Nikolić “Afaka mampahatalanjona ny famoronan'ny mpanangom-baovao an'aterineto mahatonga ny asany ho manokana sy lehibe ny mpakasary”
Mpianatra mihaino ny fampianaran'i Gordon. Saripikan'i cbojan
Ankilan'ny fifampiresadresahana tamin'Atoa Russell Gordon, dia nahazo lesona fanadihadiana ny toe-draharaha ara-politikan'i Serbia mifandraika amin'ireo firenena ao amin'ny faritra ihan koa ny mpianatra:
Nahatsikaritra i Gordana Erić fa ao Serbia no lafo fiainana indrindra amin'ireo firenena rehetra najoro tao amin'nyy faritra ex-SFRJ. Anisan'ny avo indrindra ao amin'ny faritra ny vidin'ny entambarotra fototra azo hanina.
Ljubisa Bojic nitarika ny lesona laharana fahasivy amin'ny anjara toeran'ny saripika amin'ny fanangonam-baovao an'aterineto tamin'ny 27 Desambra 2008:
Ahoana no hananganana sary tsara? Inona avy no mety ho azo ampiasana ny saripika amin'ny fanangonam-baovao an'aterineto? Nanokatra kaonty tao amin'ny tambajotra sosialy “Flickr” ny mpianatra hampidirana ny sariny.
Nianatra ry zareo amin'ny fananganana tohivakan-tsary amin'ny alalan'ny fampidirana sary sy mamoaka izany ao amin'ny tranonkalany. Taorian'izany ny mpianatra sasany namoaka tantara an-tsary an-tranonkala tamin'ny alalan'ny servisy an-tserasera “Pimpampum”.
Nampianarina ihany koa ny mpianatra handamina ny tranonkalany amin'ny fampiasana netvibes.
Tamin'ny fotoam-pianarana vao haingana ihany koa ireo mpianatra ho mpanangom-baovao no niditra tamin'ny fifanakalozana ara-pilozofika momba ny “Faharenohana” manjaka ao Serbia nandritra ny taona maro”:
Mihevitra i Gordana Erić fa ny teboka lehibe indrindra amin'ny lesona dia ny fahitana fa ny fizoran'ny fiarahamonina mankany amin'ny krizy dia noho ny faharatsian'ny rafi-panabeazana, ny tsi-firindran'ny fiarahamonina ary ireo toetra sasantsasany mampiavaka ny vahoakantsika, ankoatra ny fanomezan-tsiny ny hafa rehefa misy ny tsi-fetezan-javatra.
Nilaza i Katarina Jovanović fa niezaka hanazava amin'ny alalan'ny voambolana “voafantina” i Jenia Tanteraka fa tsy tokony “hirona sy hiandry” intsony ry zareo, fa rehefa misy ny MAIKA dia manao zavatra rehefa mihatra amin'ny aina sy ny manodidina.
Indreto ny sarimihetsika roa notontosaina taorian'ny fifanakalozan-dresaka nataon'i Katarina Jovanovic sy Miloš Kuks nampiasa sary, lahatsary ary feo:
Hajian-tsary avy amin'i zikica.zivkovic
9 ora izay